बुहारीलाई आगो लगाउने हनिफ शेष सात वर्षपछि पक्राउ – Sadarline
सदरलाइन संवाददाता १० चैत्र २०७७, मंगलवार १७:३२
नेपालगञ्ज : सात वर्षअघि बुहारीको शरीरमा आगजनी गरी फरार भएका एक ब्यक्तिलाई बाँके प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । दाईजोको निहुँमा आफ्नै बुहारीको शरिरमा मट्टीतेल छर्कि आगजनी गर्ने नरैनापुर गाँउपालिका वडा नं. २ का ७५ वर्षीय हनिफ शेष पक्राउ परेका हुन् ।
शेषलाई नरैनापुर गाँउपालिका वडा नं. १ सुईयाबाट ईलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरका प्रहरी निरिक्षक बसन्त गौतम नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले शेषलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
२०७० चैत्र २ गते बाँके लक्ष्मणपुरकी २३ वर्षीया रिहाना शेष (ढपाली) को शरिरमा मट्टितेल छकिएर आगजनी गरीएको थियो । दाईजोको निहुँमा आफ्नी छोरीमाथि आगजनी गरीएको भन्दै रिहानाका बुवा मोहम्मद समिम शेषले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी दर्ता गराएका थियो । सोही उजुरीका आधारमा शेषलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला अदालत बाँकेमा बुझाईएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न रिहानका श्रीमान फरिद शेष ढपाली र सासु सजहाद खाँ भने फरार रहँदै आएका छन् ।
पति फरिद शेषले रिहानालाई मट्टीतेल छर्केर जिउँदै आगो लगाइदिएका थिए । विवाहमा मोटरसाइकल र भैँसी दाइजो नल्याएको निहुँमा उनीमाथि त्यस्तो दुर्व्यवहार गरिएको थियो । सासु, ससुरा समेतको उक्साहटमा रिहानालाई उनका पतिले जलाएका थिए । शरीरको तल्लो भाग पूरै जलेर सख्त घाइते रिहानाको पेटमा रहेको बच्चासमेत खेर गएको थियो । बिभिन्न संघसंस्थाको ६ महिना काठमाण्डौमा उनको उपचार भयो । उनी अहिले माईतमै बस्दै आएकी छन् ।
नेपालगञ्ज : बाँकेमा १९ महिनाको अवधिमा क्षयरोगबाट ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्व क्षयरोग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको हो । क्षयरोगबारे सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा क्षयरोग र कुष्टरोग फोकल पर्सन मानव नेपालीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष […]
११ भाद्र २०७८, शुक्रबार १५:१९